Saka Iwe Unoda Kuchengeta Wiricheya yako mune Chakanaka Zvakanakisisa Chinogoneka ...
Kuchengetedza yako wiricheya yemawoko zvinogona kuve nyore kana uine rumwe ruzivo rwekuti ungachengeta sei yako wiricheya muchimiro chepamusoro. Ichi chinyorwa chinosanganisira zvinongedzo zvekuti ungachengeta sei yako wiricheya kana iwe uchichigamuchira, maitiro ekuzvichengeta zuva nezuva, runyorwa rwevhiki nevhiki, uye runyorwa rwemwedzi, uyezve runyorwa rwezvinhu zvekuchengetedza mupfungwa gore rega maererano neyako wiricheya yemawoko.
Paunogamuchira Wiricheya yako Unofanira...
Chengeta bhuku remuridzi wako munzvimbo yakachengeteka kuitira ramangwana.
Shandisa wakisi yemotokari pachigaro cheyai kuitira kuti kuchenesa mune ramangwana kuve nyore. Chengetedza maturusi muhomwe, bhegi kana mudziyo pachigaro chako kuti ushandise mune kugadzirisa emergency.
Tenga chubhu ye "kubata-kumusoro" pendi yekuvhara kukwenya uye pendi yakapetwa.
Dzidza maitiro ekuchinja matai ako.
Tenga tayi "chigamba" kit utakure uende nacho.
Tenga pombi-yekumhanyisa matai uye uende nayo.
Pane Zuva Nezuva Unofanira ...
Pukuta chigaro pasi nemucheka wakachena wakanyorova.
Simudza zvigaro zvetsoka usati wapinda kana kubuda pachigaro.
Chengetedza zvinhu zvakasununguka kana chivharo chemakumbo kure nematauri evhiri.
Itsika yakanaka kugara uchikiya mabhureki usati wapinda nekubuda mu mavhiripu
Vhiki rega rega Unofanirwa ...
Wongorora mavhiri kuti uone kuti matauro kubva kuasi kuenda kumukombero haana kugadzikana, uye kuti marimu haana kukombama.
Wongorora kumberi casters kwekudzedzereka, kutamba kwakanyanya uye kuenderana.
Chenesa ekisero dzimba dzechero marara.
Tarisa kumanikidzwa kwetaya.
Tarisa uone kuti mavhiri / mabhureki akavharirwa akasimba kune furemu uye ari nyore kuvhurwa.
Pahwaro hweMwedzi Unofanirwa ...
Mushure mekuchenesa zvakakwana, shandisa wakisi yemotokari pafuremu kuti iite inotevera yekuchenesa ive nyore.
Tarisa uone nzungu dzakasununguka nemabhaudhi.
Tarisa kutarisa kwako vhiri.
Tarisa uone kuburitswa kuri nyore uye kutsiviwa kweanobvisika makumbo emakumbo, tsoka, tsoka uye kumashure.
Ongorora chigaro chefurema kutsemuka.
Tarisa uone kuti anokurumidza-kuburitsa axles bvisa nekukurumidza.
Gore rega rega Unofanirwa ...
Tarisa uone kuti kupeta cheya kwakavhurika uye kupeta zviri nyore. Lubricate kupeta mashandiro.
Zora mafuta ese epivot.
Lubricate bhora mabheyaringi.